Ajụjụ A Na -ajụkarị: Kedu ụdị mmeju dị na ahịrịokwu?
Gịnị bụ mmejupụta ahịrịokwu ahụ?
Kedu ihe atụ mgbakwunye?
Kedu ihe bụ mgbakwunye na gịnị ka ha kewara?
Kedu ka esi amata plugins?
Kedu ihe bụ mmeju okwu na atụ?
Kedu ihe ahịrịokwu pụtara?
Kedu ihe atụ plugins kpọmkwem?
Kedu ihe bụ onye nnọchi anya onye nnọchi anya na ihe atụ 5?
Kedu ihe na -abụghị ihe dị na ahịrịokwu atụ?
Kedu ka esi achọpụta ihe kpọmkwem?
Kedu ụdị mmeju nke predicate?
Kedu ahịrịokwu ndị nwere naanị otu ngwaa?
Kedu ihe atụ nkwado nke dabara na nke na -apụtachaghị anya?
Mgbakwunye isiokwu nwere ike bụrụ ntozu, mkpebi ma ọ bụ nkọwapụta, yana nkọwa; ebe mmejupụta nke ngwaa a kapịrị ọnụ, na -apụtachaghị ìhè, na ọnọdụ. Ntozu: mejupụtara otu ma ọ bụ karịa tozuru oke ma ọ bụ adjectives.
Ihe a kapịrị ọnụ bụ akụkụ ahịrịokwu nke na -emezu amụma ahụ ma na -egosi ihe ma ọ bụ onye isiokwu ahụ na -eme ihe ngwaa ahụ. … Dịka ọmụmaatụ, n'ime ahịrịokwu na -esonụ: José na -arụ ụgbọ ala. Isiokwu: José, na -eme ihe: mejupụtara, ihe José na -eme, dakwasịrị ihe: ụgbọ ala.
Nkwado kpọmkwem: Ọ bụ nke na -egosi onye ma ọ bụ na omume ngwaa gosipụtara kpọmkwem. A makwaara ya dị ka ihe kpọmkwem. . A na -akpọkwa ihe mgbakwunye a ihe anaghị apụ apụ.
Anyị nwere ike ịchọpụta CD dabere na njirisi ndị a:
Na -ajụ ngwaa "gịnị?" ma ọ bụ "onye?": ...
Enwere ike dochie ya na nnọchiaha lo (s), la (s), dabere na okike asụsụ na ọnụọgụ: ...
Mgbe ihe kpọmkwem bụ ihe, enwere ike dochie ya "that" / "ihe ndị ahụ":
Ọ BỤ mmasị: Kedu ka okpiri nke Kraịst dị?
Ngwaa ngwaa bụ otu mkpụrụokwu ndị ahụ niile na -eso ngwaa ahụ na -aga n'ime ahịrịokwu. … Ọ dị mkpa ịmara ụdị ngwaa nke na -eme ka ịme nyocha nke ọma nke ahịrịokwu ọ bụla.
Ahịrịokwu bụ nkeji okwu nwere nkọwa zuru oke. Ahịrịokwu bụ nkebi ahịrịokwu nke na -egosipụta ụdị amụma na nke nwere isiokwu (nke enwere ike ịkwa iko) yana amụma nke ntọala ya bụ ngwaa na -agbanwe agbanwe mgbe niile.
Ihe atụ dabara adaba ozugbo
Ị zụrụ soda?
Adela mere m ihe ọ juiceụ deliciousụ na -atọ ụtọ.
Anyị ruru ihe mgbaru ọsọ ahụ.
Alejandra gbajiri ụkwụ ya.
Ana na Pedro riri ọtụtụ ice cream.
Ụnyaahụ enwere m ravioli.
Elere m ihe egwu egwu ụnyaahụ.
Ụnyaahụ agara m ebe ngosi nka mara mma.
Mgbakwunye nke onye nnọchi anya bụ otu n'ime ihe arụpụtara nke ahịrịokwu olu na -agafe agafe ma na -egosi onye mere ihe ahụ. Dịka ọmụmaatụ: Ọ bụ nwunye m mere ndoputa ahụ. .
Ihe na -apụtaghị ihe ma ọ bụ ihe na -abụghị ihe na -ezo aka na onye ma ọ bụ ihe a na -eduzi ngwa ngwa ahụ. Dịka ọmụmaatụ: Azụrụ m nwa nwanne m nwanyị ekwentị. Ihe ọ bụla na -apụtachaghị ọnụ (IC) nọ na ahịrịokwu wee zaa ajụjụ Onye? Na gịnị? o Maka onye?
Ihe a kapịrị ọnụ bụ onye ọrụ ngwaa ahụ na -ada: dịka ọmụmaatụ, na ahịrịokwu nke ụdị: Yo me peino, ME, bụ ihe a kapịrị ọnụ, n'ihi na ọ bụ onye ahụ ka ngwa ngwa peinar na -ada.
Ọ BỤ mmasị: Ị jụrụ: Ebee ka ndị ụkọchukwu Mayan bi?
Mmeju nke ngwaa na nnọkọ okwu
Okwu "arụmụka": Mmeju na -aga n'ihu (CD): na -eso ngwaa ntụgharị. Mmeju na -apụtaghị ihe (CI). ...
Mgbakwụnye sịntetik (ihe oblique): Mgbako gburugburu (CC). Nkwado nkwado nke ngwaa.
Ahịrịokwu dị mfe bụ nke nwere otu ngwaa ma ọ bụ mkpụrụokwu periphrase. …
N'ime ahịrịokwu a, "un café" bụ ihe (CD) na -enweta ozugbo na ngwaa ngwaa "were". … Ihe na -apụtachaghị ìhè (CI), mgbe etinyere ya n'ihu ngwaa, a na -emepụtaghachi ya site n'aha akpọghị akpọ "le", "les" ("Ha nyere Juan ụgbọ ala"), ebe ihe kpọmkwem (CD) anaghị enye.
Banyere okpukpe 0
Azịza kacha mma: Gịnị bụ Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi nke ihe ọmụma?
Gịnị bụ onyeisi ndị mmụọ ozi maka Mọnde taa? Ụbọchị nsọpụrụ nke onyeisi ndị mmụọ ozi Jophiel
Gịnị bụ okpukpe Tahuantinsuyo?
Kedu ka okpukpe dị na Tahuantinsuyo? Okpukpe ndị Incas na -ekwu bụ
Gịnị ka Jizọs jụrụ Chineke n'ekpere?
Gịnị mere ị ga -eji kpee ekpere n'aha Jizọs? Onyenwe anyị Jizọs Kraịst
Kedu ihe e ji amatakarị okpukpe dị iche iche?
Kedu ihe e ji amatakarị okpukpe dị iche iche? Atụmatụ pụrụ iche. Monotheism, dị ka
Azịza kacha mma: Gịnị bụ ntughari dịka Ụka ​​Katọlik siri dị?
Gịnị bụ ntụgharị maka gị? Nchigharị bụ okwu sitere na
Kedu ihe Kraist onye mgbapụta Brazil pụtara?
Ajụjụ gị: Gịnị bụ onyeozi na gịnị bụ onye na -eso ụzọ?
Azịza kacha mma: Gịnị ka ọkụ ekeresimesi pụtara?
Ajụjụ gị: Ebee ka Abba kwuru na Baibul?
Kedu usoro okpukperechi bụ nke nwere mmetụta kachasị na agụmakwụkwọ n'oge oge ọchịchị na Chile?
Gịnị ka ụkọchukwu na -ekwu mgbe ọ gụchara Akwụkwọ Nsọ na Oriri Nsọ?
Kedu ka okpukpe dị na Chile?
Gịnị bụ oge anọ nke ụka nke ụka Katọlik?